जे.बी. दर्नाल प्रकरण: राजनीतिक तथा गैर-राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया - The Sikkim Chronicle
SC Bureau Jun 23, 20210307
जे.बी. दर्नाल प्रकरण: राजनीतिक तथा गैर-राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया
Jun 14, 2020 - 16:29
एसडीएफ पार्टीका प्रवक्ता जे.बी. दर्नालमाथि भएको हमलाको चौतर्फी विरोध शुरु भएको छ। उनलाई गत 12 जूनको अपरान्ह 2:55 बजे दुई अज्ञात व्यक्तिहरुले ईन्दिरा बाईपासमा हमला गरेको कुरा पार्टीद्वारा हिज बेलुकी जारी एक प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको थियो। “दिनको उज्यालो अनि असङ्ख्य मानिसहरूको आवतजावत भइरहेको समयमा पनि यसप्रकारको प्राणघातक हमला हुनु अति निन्दनीय छ। एसडीएफ पार्टी यस्तो जघन्य कार्यको घोर भर्त्सना जनाउँदछ” भन्दै पार्टीले आफ्नो सो विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
आज प्राय: दिनभरिनै विभिन्न राजनैतिक पार्टी, गैर राजनैतिक संघ-संस्था अनि विभिन्न व्यक्तिहरुले विभिन्न माध्यमहरुद्वारा यस घटनामाथि आ-आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेका छन्। पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले आफ्नो ट्वीटर अकाउन्ट मार्फत “म एसडीएफ पार्टीका प्रवक्ता श्री जे.बी. दर्नाललाई दिनको उज्यालोमा भएको प्राणघातक हमलाको कड़ा निन्दा गर्दछु। एसडीएफ पार्टीले निडरताका साथ जनताको आवाज उठाइरहनेछ” भनेका छन्। तिनले सो पोस्टमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनि गृह मन्त्री अमित शाहलाई ट्याग गरेका छन्। सोही ट्वीटमा एक प्रतिक्रियाको उत्तर दिँदै तिनले यसबारे एफआइआर दर्ज भइसकेको कुरा बताएका छन्। यस लगायत राज्यभरी रहेका पार्टीका विभिन्न शाखा कार्यलयहरुमा सभा डाकेर सदस्यहरुले यस घटनाबारे कड़ा प्रतिवाद जनाउँदै दोषीहरुलाई यथाशीघ्र पक्राउ गरिनु पर्ने माग राखेका छन्।
हाम्रो सिक्किम पार्टीले एक विज्ञप्तिमा यस घटनाबारे प्रतिवाद जनाउदै “यस प्रकारको हमला प्रजातन्त्रमा विपक्षी आवाजहरुलाई दबाउने प्रयास हो। विपक्षीहरु प्रजातान्त्रिक प्रणालीका अभिन्न अंगहरु हुन्, यसैले अन्यथा प्रमाणित नभए यस किसिमको हमला प्रजातन्त्र माथिनै गरिएको एउटा हमला हो भनी हाम्रो पार्टीले मानिलिएको छ”, भनेको छ।
सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमिटीका कोषाध्यक्ष टाँशी भुटियाले पार्टीको तर्फबाट एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस घटनाबारे पार्टीको तर्फबाट घोर निन्दा व्यक्त गरेका छन्। “व्यक्ति जुनसुकै दलको भए पनि सुरक्षाको दृष्टिले समान्तर न्याय पाउनु पर्छ साथै नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनु सरकारको सम्वैधानिक जिम्मेवारी ‌हो। राज्यमा नागरिक सुरक्षा खातिर सरकार एवं प्रशासन सदैव सक्रिय रहनका साथै हिजो भएको घटनालाई प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक लिएर कठोर कार्वाही गरी कानुन र व्यवस्थाको मर्यादा बनाउनु उचित हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आइएम 371F अभियानको संयोजक तथा सामाजिक अभियान्ता पासाङ शेर्पाले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै “यस्तो असभ्य, घृणित, बर्बर र कायरतापूर्ण कार्यको सिक्किमे समाजमा कुनै ठाउँ छैन। तसर्थ, सिक्किम सरकार र प्रहरी विभागले झट्ट भन्दा झट्ट यस घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई पक्राउ गरेर कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा सजाय दिनु पर्छ” भन्ने माग गरेका छन्।
सिक्किम प्रोग्रेसिभ यूथ फोरमले पनि यस घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ। “नागरिक सुरक्षा सरकारको जिम्मेवारी हो। राज्यका सबै नागरिक लगायत विपक्षमा रहेका सबै व्यक्तिहरूलाई सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ”, फोरमले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ। दोषीलाई चाँड़ै पक्राउ गरी कानूनी कार्वाही गरिनु पर्ने माग फोरमले पनि राखेको छ।
कोमल चामलिङले “यो राजनीति प्रेरित आक्रमण भएपनि यसलाई हाम्रो आवाज खोस्ने, हामीलाई चुप गराउने प्रयासको रुपमा हेरिन्छ होला भन्ने आशा गरेकी छु। हाम्रो आवाज खोसिनुजस्तो दमनकारी अनि हिंसात्मक विषय बरु केही हुनै सक्दैन”, भनेकी छन्।
Bimal Thapa Sep 20, 202003232
Bimal Thapa Nov 23, 20200688
Bimal Thapa Oct 16, 20200910
Bimal Thapa Oct 5, 202001383
Bimal Thapa Jan 25, 202101015
Bimal Thapa Jul 16, 20200645
Bimal Thapa Nov 1, 202001401
SC Desk Mar 24, 20210724
admin Oct 2, 20200680
admin Sep 1, 20200543
SC Bureau Jun 18, 20200943
Shradha R. Chhetri Nov 29, 202001108
Bimal Thapa Aug 27, 20200822
Shradha R. Chhetri Sep 29, 20200454
admin Jul 9, 20200325
Sherab Palden Bhutia May 8, 20210823